ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်: ကျနော်လူဆိုး (၁)
“သားရယ် ပုဆိုးကို သေချာဝတ်ပါ ပိုသီပတ်သီနဲ့..”
“ပြောလိုက်ရင် ဟုတ်.. မေ့.... ဟုတ်.. မေ့နဲ့.. ဘယ်တော့ မှ မပြင်ဘူး..”
ကျောင်းသွားခါနီးတိုင်း ကြားနေကျ မေမေ့အသံက ရိုးသလိုတောင် ရှိနေပါပြီ..။ ဘယ်တော့မှ နားမထောင်ဖြစ်ခဲ့..။
ကျောင်းစိမ်း ဝက်ဝံပုဆိုး အစိမ်းပုပ်ရောင်က ကျနော့် အတွက်တော့ နည်းနည်း ကြီးနေပါသေးတယ်.. ဒါပေမယ့် ဝတ်မှာပဲ.. ဒါ ကျော်သူ စတိုင်လေ..။ ပုဆိုးကခပ်တိုတို.. ခါးပုံစက ရှည်ရှည်.. ရှပ်အင်္ကျီ အဖြူပွပွနဲ့ ကျနော့် ပုံက ရှစ်တန်း ကျောင်းသားပုံတော့ မပေါက်ပါဘူး..။ လွယ်ကြိုးကို အထုံးကြီးကြီး ထုံးထားတဲ့ ကျော်သူ လွယ်အိတ် အဖြူပွပွကြီး လွယ်ပြီး ဦးထုပ်ကို ပြောင်းပြန် စောင်းလိုက်တော့ ခပ်ဆိုးဆိုး ဂျစ်ကန်ကန် ကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာ ပြောနေစရာမလိုပါဘူး..။ ဒါ ကျနော့် စတိုင်..။
“ဟဲ့.. သား.. စက်ဘီးကို ဖြေးဖြေးစီးနော် ခင်လေး ကိုလည်း စစ မနေနဲ့..”
“ဟုတ်))))))))))).... မေ့ ......”
မေမေ့ စကားသံတောင် မဆုံးသေးဘူး အိမ်ရှေ့မှာ ထောင်ထားတဲ့ စက်ဘီးကို ဒေါက်ဖြုတ်.. အရှိန်နဲ့ ပြေးတွန်း တွန်းရင်း လွှား ကနဲ ခုန်တက်လိုက်တယ်..။ ဒါက ကျနော် စက်ဘီးပေါ်တက်တဲ့ စတိုင်..။ မေမေ့ စကားကိုလည်း တော်တော် နားထောင်တာပါ..။ စက်ဘီးကို မြွေလိမ် မြွေကောက် စီးမယ်..။ ရှေ့ဘီး ထောင်မယ်.. နောက်ဘီးထောင်မယ်..။ အဲ့ဒီလောက်ကို လိမ္မာတာ..။
ကျနော်တို့မြို့လေးရဲ့ ကျောင်းတက်ချိန် မနက်ခင်းလေးက စက်ဘီးလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ဖြူဖြူ စိမ်းစိမ်းကြီးကို လှနေတာပါ..။ တောင်ပေါ်မြို့လေးဆိုတော့ ကုန်းတက်လေးတွေ.. ကုန်းဆင်းလေးတွေနဲ့..။ ကုန်းတက် ရောက်ရင် စက်ဘီးကို မတ်တတ်ရပ်ပြီး နင်းပါတယ်.. စက်ဘီးကို ဘယ်ယိမ်း.. ညာယိမ်းနဲ့ ကိုယ်ကို ဟန်ချက်ညီညီ စောင်းရင်း.. ယိမ်းရင်း.. နင်းတက်လိုက်တာ ကုန်းတက်လေးတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု..။ ကုန်းဆင်းရောက်ရင်တော့ လက်နှစ်ဖက်ကို လွှတ်ပြီး စတန့်ထွင်စီးလိုက်ပါသေးတယ်..။
“(((ကလင်းးးး လင်းး ကလင်းး ကလင်းး..))) ခင်လေး.. ဟေ့ ခင်လေး..”
ခင်လေးတို့ အိမ်ရှေ့အရောက် စက်ဘီး ဘဲလ် ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း တီးရင်း အော်ခေါ်လိုက်တော့..
“ခင်လေး ခုလေးပဲ သွားပြီ သားရဲ့..”
ခြံထဲတွင် နှင်းဆီပန်း ခူးနေတဲ့ ခင်လေး မေမေက လှမ်းပြောတယ်..
“အော်.. ဟုတ်.. အန်တီ.. ဒါဆို သားလည်း သွားတော့မယ်..”
“အေးအေး.. သား.. မောင်နှမ နှစ်ယောက် ရန်မဖြစ်နဲ့နော်..”
ခင်လေးမေမေကလည်း ကျနော့်ကို ချစ်ပါတယ်..။ ခင်လေးနဲ့ မတည့်မှန်းလည်း သိတယ်.. ကျနော် ဆိုးမှန်းလည်း သိတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျနော်ကပဲ ချစ်မွှေးပါသလားမသိ ကျနော့်ကို ချစ်ကို ချစ်ကြတာ..။
လမ်းမှာတွေ့တဲ့ လူတွေကို စရင်း နောက်ရင်း နှုတ်ဆက်ရင်း ကျောင်းဖက်ကို ဆက်နင်းလာခဲ့တယ်..။ ခင်လေး ကတော့ ကျနော့် ရန်ကို ကြောက်လို့ စောစောထွက်သွားတာနေမှာ.. ကျောင်းသွားရင် သူ့စက်ဘီးရှေ့က ကိုးရိုးကားရား ပတ်စီး..။ ကုန်းတက်ရောက်ရင် သူ့စက်ဘီး ကယ်ရီယာကို အနောက်ကနေလိုက်ဆွဲနဲ့ အမျိုးမျိုး စတတ်တဲ့ ကျနော့်ကို ကြောက်မယ်ဆိုလည်း ကြောက်စရာပါ..။ သူ အိမ်မှာ သွားသွား တိုင်လို့ မေမေ ရိုက်ပေါင်းလည်း များပြီ.. အဲ့ဒါလည်း မမှတ်..။ ခင်လေးနဲ့က မွေးကတည်းက ကုတင်ဘေးချင်း ဖွားဖက်တော်တွေ..။ မေမေကလည်း ခင်လေးကို တော်တော်ချစ်တယ်.. ချစ်မှာပေါ့.. ခင်လေး မေမေ နို့မထွက်လို့ ကျနော့် မေမေက ခင်လေးကို နို့တိုက်ခဲ့ရသေးတာကိုး..။ နို့စို့ဖက် တွေ ဆိုပါတော့..။
“(((((ဒေါင်း.. ဒေါင်း.. ဒေါင်းဒေါင်း ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းးးးးးး)))))”
ကျောင်းတက် သံချောင်းလည်း အခေါက် ကျောင်းရှေ့လည်း အရောက် ကွက်တိပါပဲ..။
ဗြုံးကျောက်ခဲလေးတွေ ခင်းထားတဲ့ စက်ဘီးရပ်တဲ့နေရာရောက်တော့ ရှေ့ဘရိတ်ကို အုပ်.. ခြေတစ်ဖက်ကို ထောက်ပြီး နောက်ဘီးကို ဒရွတ်တိုက် “ရှော” ကနဲ စက်ဝိုင်းပုံ တစ်ပတ်လည့်ပြီးမှ ပါကင်ထိုးလိုက်တယ်.. စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီတီ စီးလာတဲ့ ဆိုက်ကယ် စတန့် မင်းသားလိုလို..။ အဲ့ဒါ ကျနော့် စက်ဘီး ရပ်တဲ့ စတိုင်..။
ကျနော်တို့ ကျောင်းက အလယ်တန်းကျောင်းလေ.. ဖုန်တွေ တက်နေတဲ့ ပျဉ်ဆောင်ကြီး..။ ခင်လေးနဲ့က အခန်း မတူဘူး.. သူက ရှစ်တန်း အေ.. ကျနော်က ဘီ..။ အခန်း မတူတာကိုပဲ သူကပျော်နေတာ မဟုတ်ရင် ကျနော် နှိပ်စက်တာ ပိုခံရမှာလေ..။ သူတို့ အခန်းက ဒေါင့်ခန်း.. ခင်းလေးထိုင်တာက ပြူတင်းပေါက် ဘေးမှာ..။
အခန်းထဲ အားလုံး ဝင်ကုန်ကြပြီ..။ ဟော... တွေ့ပါပြီ.. ဒင်းက အတန်းထဲတောင် ရောက်နေပြီ.. ဒီနေ့တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း သူ့ဆံပင် နီကြောင်ကြောင်ကို နှစ်ဖက်ခွဲပြီး စည်းထားပါလား.. ပါးမှာလည်း ပါးကွက်ကြားနဲ့..။
ပြူတင်းပေါက် ဘောင်ကို လက်ထောက်ပြီး..
ခေါ်လည်း ခေါ်.. လက်ကလည်း ခေါင်းကို ပုတ်ပြီးသား..
“ကောင်စုတ်.. စောစောစီးစီးနော် ရန်လာမစနဲ့..”
ခေါင်းကို ပုရင်း မျက်လုံး ပြူးပြူးကို စောင်းနေအောင် ထိုးလိုက်တဲ့ မျက်စောင်းက ကျနော့်အတွက်တော့ ဘာဟုတ်တာမှတ်လို့..
“ဟဲဟဲ.. နင် ငါ့ ကြောက်လို့ သွားနှင့်တာမလား..”
“အမယ်.. နင့်များ သေတောင် မကြောက်ဘူး.. ငါ သန့်ရှင်းရေးရှိလို့ စောလာတာ..”
“ဟဲဟဲ.. ကြောက်ရင် ကြောက်တယ်ပြော.. ငါတို့ အခန်းရော တံမြက်စည်း လှဲပြီးပြီလာ..”
“သေနာ.. ငါ ကွန်ပါဘူးနဲ့ ပေါက်လိုက်မယ်နော်.. သွားသွား ဆရာမလာပြီ..”
ကျနော်လည်း ကျနော့် အခန်းထဲကို ခုန်ပေါက်ပြီး ဝင်လိုက်တော့တယ်..။
......................................... (၂) .........................................
အတန်းထဲမှာတော့ ကျနော်က လူပြောင်တစ်ယောက်ပါ.. ဟိုလူ့စ ဒီလူ့စနဲ့ ဗရုတ်ကျကျပေါ့..။ အိမ်စာဆိုလည်း ဘယ်တော့ မှ မပြီးဘူး..။ စာမေးရင်လည်း ဟိုလိုလို ဒီလိုလို..။ ဆရာမကို ဝေ့လည်း ကြောင်ပတ်နဲ့ ဟိုဟာ ပြန်မေး ဒီဟာပြန်မေး..။ အတန်းပိုင် ဆရာမက ခဏခဏပြောတယ်..
“ရင်နော် နင်တော့နော်.. ရိုက်ရင်လည်း နာရုံပဲရှိမယ်.. ဉာဏ်ကောင်းရဲ့သားနဲ့ စာမကြိုးစားဘူး.. မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့ဖို့ပဲသိတယ်” တဲ့..
ကျနော်ကတော့ ဆရာမ ဆူရင်လည်း ပြုံးပြုံးကြီး တဟီးဟီးနဲ့ စပ်ဖြီးဖြီး ပြန်ကြည့်နေလိုက်တာပဲ..။
ကျနော်ကလည်း ကျနော်ပါ.. စာကျက်လိုက်ရင် ခဏလေးနဲ့ ရရဲ့သားနဲ့ မကျက်ဘူး..။ မေမေရိုက်လည်း ရိုက်ရိုက်ပဲ.. ဆရာမရိုက်လည်း ရိုက်ရိုက်ပဲ..။ ဆော့မယ်.. သူများကို စ မယ်.. ဒါပဲ ကျနော့် ဝါသနာ..။ အတန်းထဲမှာဆို အမြဲ ကပ်အောင်ပဲ..။ ဘယ်တော့မှ အဆင့်တွေ ဘာတွေ ချိတ်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး..။ ခင်လေးကတော့ သူတို့ အတန်းမှာ အမြဲ ပထမရတယ်.. လက်ရေးဆိုလည်း ဝိုင်းနေတာပဲ..။ ကျနော့် လက်ရေးကသာ ပဲပင်ပေါက် အထုတ်လိုက် ကားတက်ကြိတ်ထားတဲ့ လက်ရေး..။ မေမေ ဆို ခင်လေးနဲ့ နှိုင်းနှိုင်းပြီး ကျနော့်ကို အမြဲ ဆူတယ်.. အသုံးကို မကျဘူး.. ဘာညာကွိကွပေါ့..။ မေမေဆူလေ ခင်လေးကို ပိုတင်းလေပဲ.. ဒင်းကြောင့် ဆူခံရတာ.. ဒင်းသာ စာညံ့နေရင် ကျနော် ဆူခံရမှာ မဟုတ်ဘူး..။
“(((ဒေါင်း ဒေါင်း ဒေါင်းဒေါင်း ဒေါင်းးးး..)))”
မုန့်စားကျောင်းဆင်းပြီ... မေမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ မုန့်တွေက ဆရာမ စာသင်နေတုန်းမှာ ခိုးခိုးစားလိုက်လို့ ကုန်ပြီ..။ အခု စားစရာက မရှိတော့ဘူး..။ ဟွန်း ဟွန်း.. ဘယ်ရမလဲ.. ဒင်းတစ်ယောက်လုံးရှိတာပဲ..။ ညာတာပါတေးနဲ့ သွားတောင်းစားမှ..။
ခင်လေးတို့ အတန်းထဲ ဝင်သွားလိုက်တော့ ဒင်းက စားပွဲပေါ်မှာ မှောက်ပြီး အိပ်နေလေရဲ့...
ခင်လေးနဲ့ တူတူထိုင်တဲ့ ထက်သူဇာလှဝင့်ရွှေရည် က
“ဟဲ့ ရင်နော် နင်သွား မစနဲ့နော် ခင်လေး ဗိုက်နာနေလို့တဲ့..”
“ဟမ်.. ဟုတ်လား.. ဘာစားလို့လဲ..”
“ဘာမှ မစားဘူး သူ့မုန့်ဗူးတောင် ဒီတိုင်းရှိသေးတာ..”
ကျနော့် မျက်လုံးက ခင်လေး မုန့်ဗူးဆီကို “ဂွီ” ကနဲ ရောက်သွားတယ်..
“ဟဲ့ ခုနှစ်လုံး နင်တို့က လျက်ဆားတွေဘာတွေ မကျွေးထားဘူးလား..”
“ထက်သူဇာလှဝင့်ရွှေရည်” က သူ့ကို “ခုနှစ်လုံး” လို့ ခေါ်တာ သိပ်တော့ မကြိုက်.. လေသံခပ်မာမာနဲ့.. ပြန်အော်တယ်..
“ဘာ ခုနှစ်လုံးလဲ သေဦးမယ်.. ဘာ လျက်ဆားမှ မရှိဘူး..”
“ဒါဆို နေဦး ငါ လျက်ဆား သွားရှာဦးမယ်.. ခင်လေး.. ဟေ့.. ခင်လေး.. နင် လျက်ဆား စားလိုက်နော်.. ငါသွားယူလာခဲ့မယ်..”
ခင်လေးက တော်တော် နာနေတယ် ထင်ပါတယ်.. ခေါင်းတောင် မထောင်နိုင်ဘူး..
“ဟဲ့ နင့်မုန့်ဗူးကရော.. မုန့်စားလို့ ဖြစ်တာထင်တယ်..”
ခင်လေးက ကြိုးစားပြီး ခေါင်းထောင်လာတယ်.. မျက်နှာက ရှုံ့မဲ့လို့.. လက်တဖက်ကလည်း ဗိုက်ကို ဖိထားသေးတယ်.. အသံခပ်တိုးတိုးနဲ့..
“အေအေ.. နင်ဗိုက်နာနေရင် ဘာမှ စားလို့ မရဘူး.. ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်.. ငါလျက်ဆားသွားရှာခဲ့မယ်နော်..”
ကျနော်လည်း ခင်လေးရဲ့ မုန့်ဗူးကို “ဂလု” ကနဲ့ နေအောင် ဆွဲပြီး လစ်တော့တာပဲ..။
စိန်ပန်းပင်ကြီး အောက်မှာ အကျအနထိုင်ပြီး မုန့်ဗူးကို ဖွင့်လိုက်တော့.. အားပါးပါး.. ပေါင်မုန့်ယိုသုတ်က မွှေးနေတာပဲ.. ချိုချဉ် သုံးလုံးလည်းပါတယ်.. လိမ္မော်သီး အခွံနွှာပြီးသားလေးတွေလည်း ပါတယ်..။ ဟီးးဟီးးဟီးးး ခင်လေးမေမေက သေချာ လုပ်ပေးလိုက်တာ.. ဟဲဟဲ.. ခုတော့ တားတားအတွက်.. တားတားပဲ ချားလိုက်တော့မယ်.. ဟဲဟဲ.. “ဇိ” ကနဲ “ဇိ” ကနဲ အားရပါးရ ကိုက်စားလိုက်တာ ဗိုက်ကို တင်းရော..။
လျက်ဆား ဘယ်က ရမလဲ..!!
ခေါင်းထဲမှာ “တိန်” ကနဲ မီးလင်းသွားတယ်..
ရွှေဉာဏ်တော်က အကျင့်တော် ပုပ်ဖို့ဆို စူးရှလှပါပေ့..။
ပျဉ်ဆောင်ကြီး နံရံမှာ ဖုန့်မှုန့်တွေ တော်တော်ထူထူကပ်နေတာ.. လမ်းဘေးလည်းဖြစ် ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကားကလည်း များဆိုတော့ ဖုန်တွေ အလိပ်လိပ် တက်နေတာပေါ့..။ ငတက်ပြား ခြေလှမ်းမျိုးနဲ့ အခန်းပြင်ကိုထွက်..။ ပျဉ်နံရံက ဖုန်မှုန့်တွေကို လက်ညိုးလေးနဲ့ အသာသပ်.. လက်ဖုဝါးပေါ်သေချာထည့်.. ပြီးတော့.. ဒန် တန့် တန်..။
“ဟူးးး.. ခင်လေးရေ... ဒီမှာ ရပြီ လျက်ဆား.. ရုံးခန်းမှာ သွားတောင်းလာခဲ့တာ.. ကောင်းတယ်ဟ.. ခင်လေး ကြည့်စမ်း..”
လက်ဖဝါးပေါ်က ဖုန်လျက်ဆားကို လက်ညိုးနဲ့ တို့.. ပြီးတော့ လက်ခလယ်ကို ပါးစပ်ထဲထည့်.. တကယ် စားနေသလိုလို ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် “ပလပ်ပလပ်” လုပ်ပြလိုက်တော့ ခင်လေးလည်း စားချင်လာတယ် ထင်ပါတယ်..
ထက်သူဇာလှဝင့်ရွှေရည် ကလည်း စားလိုက် ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ သူ့ကို ခေါင်းညိတ်ပြနေတယ်..
ကျနော်က လက်ဖဝါးကို လှမ်းပေးလိုက်တာက သူ့လက်နဲ့ တို့စားဖို့ပါ.. ဒင်းက ကျနော့်လက်ဝါးကို မှောက်ပြီး ဖုန်လျက်ဆားကို ဒင်းလက်ဝါးထဲ ပြောင်းထည့်လိုက်လေရဲ့.. ပြီးတော့ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့.. ခေါင်းကို မော့ပြီး.. “ဗတ်” ကနဲ့ ပါးစပ်ထဲ ပစ်သွင်းလိုက်တာ အကုန်လုံးပါပဲ..
ကျနော် မျက်လုံး ပြူးသွားတယ်.. သွားပြီ.... အီးးးးးး
ပလပ်ပလပ်နဲ့ စားကြည့်နေတယ်.. မျက်မှောင်ကြုတ်လာတယ်.. အရသာတွေ့သွားပြီ...
“ဖလူးးးးးးးးးးးးး ဖူးးးးး... ထွီးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဝလူးးး ဝလူးးးးးး အားးးးးးးးး”
ကျနော် မျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်တယ်.. သွားရှာပြီ...
“ဝါးးးး.. ဝါရီးဝေရဲ.. ဖွီးးးးးးးး ဝေါ့...”
(“အားးး.. ဘာကြီးတွေလဲ” ဆိုတာကို ဗလုံးဗထွေးနဲ့ ပြောတဲ့ အသံ)
“ဟာ... ငါ.. ငါ..”
ကျနော် ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ
“ခွေကောင်စုတ်.. နင် နင်.. အီးးး ဟီးးးး ဖလူးးးးး ထွီးးးးးး အီးးးးဟီးးရီးးရီးးး တိုင်ပြောမယ်.. အဟွတ် အဟွတ်... သွာာားးးးးး ”
ငိုလည်း ငို အော်လည်း အော် စားပွဲပေါ်က စာအုပ်တွေနဲ့ ကောက်ပေါက်.. ကျနော်လည်း ပြေးရုံမှ တပါး အခြားမရှိတော့ပြီ..။
ဘယ်လို ကျန်ခဲ့လည်း တော့ မသိ.. ကျနော်လည်း လစ်တာ တန်းနေတာပဲ..။
သေချာတာက သူ ကျနော့် မေမေ့ကိုပဲ တိုင်မှာ ဘယ်လောက် စစ ကျောင်းမှာ ဆရာမတွေကို မတိုင်တတ်တာ ဒင်းရဲ့ အကျင့်..။
......................................... (၃) .........................................
ကျောင်းဆင်းတော့ ခင်လေးတစ်ယောက် စက်ဘီးကို မြန်မြန်ထုတ်ပြီး ထွက်သွားလေရဲ့.. မျက်နှာကလည်း ငိုထားတာ နီရဲလို့..။ သေချာပြီ မေမေ့ဆီသွားပြီ..။ မတတ်နိုင်ဘူး ရင်ဆိုင်ရုံသာရှိတော့တာပေါ့.. ကိုယ်က လွန်သွားပြီပဲ..။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ဒင်းစက်ဘီးက ခြံထဲမှာ ရပ်ထားလေရဲ့..။
“အီး ဟီးးး ရှိရှိ.. ဟင့် ဟင့် ဟီးးးး ရှိရှိ.. ဟီးး ရီးး ရီးး ရီးးးးးး ရှိရှိ”
အခြေအနေ မကောင်းဘူး.. ဒင်းငိုသံက တော်တော် အရှိန်ရနေပြီ.. “တရှိရှိ” နဲ့ ရှိုက်ရှိုက်ပြီးကို ငိုနေတာ..
ဖနောင့်က ခြေမှုန်လေးကို လက်ညိုးလေးနဲ့တို့.. အသက် အောင့်ပြီး နဖူးကို သုတ်လိုက်တယ်..။ အကျင့်ပါနေလို့သာ အန္တရာယ် ကင်းလို ကင်းငြား သုတ်လိုက်တာ.. ဒီလို လုပ်တိုင်းလည်း ရိုက်ခံရတာပါပဲ..။ အခုတော့ ရင်တွေလည်း “တဒိန်းဒိန်း..” ကြက်သီးတွေလည်း “တဖြန်းဖြန်း..” ကြောက် အီးအီးတွေလည်း ပန်း ချင်သလိုလို..။
“လာစမ်း..!! လာစမ်း..!! နင်ဟာလေ.. ငါ သတ်မိတော့မယ်..”
မေမေ တော်တော် စိတ်ဆိုးနေပြီ.. လက်ထဲမှာလည်း ဖုန်သုတ်တဲ့ ကြက်မွှေးနဲ့..
“လာစမ်း.. ကဲ ဟယ်.. ကဲ ဟယ်.. ((((ဖုန်း)))) ((((ဖုန်း)))) (((ရွှမ်း..))) ကယ် ဟယ်.. ((ရွှမ်း)) ဖုန်မှုန့်ကိုများ ဘာမှတ်နေလဲ.. ဟင်းး.. ရောဂါတွေ ဘာတွေ ရနိုင်တယ် သိရဲ့လား.. ((((ဖုန်း)))) ((((ဖုန်း)))) ((((ရွှမ်း)))) ((((ရွှမ်း)))) ကယ် ဟယ်.. ကယ်ဟယ်... (((ဖုန်း..)))...”
မေမေ တကယ်ရိုက်ပါပြီ.. ပြောလည်း ပြော ရိုက်လည်း ရိုက်..
“အား... မေ့ .. မေ့.. မဟုတ်... အာ့.. မေ့.. ဟင့်.. အာ့ နာတယ်..”
ကျနော် ခုန်ရှောင်ရင်း.. ခုန်ဆွဆွနဲ့ မျက်ရည်တွေ ဝဲလာပြီ.. ဝက်ဝံပုဆိုးကြီးက ထူနေလို့သာ ခံသာတာ.. မေမေ့ ဒေါသက တော်တော် ပြင်းနေပြီ.. ခြေသလုံးကိုများ ထိလိုက်ရင် “ရွှမ်း” ကနဲ “ရွှမ်း” ကနဲ နေတာပဲ..။
“အီးးးးဟီးးး နောက် မစတော့ ပါဘူး.. ဟီးးး အာ့ဟဟ နာတယ် မေ့.. ဟီးးး ရှိရှိ.. ရှီး ရှလွတ်..”
ကျနော်လည်း နာလွန်းလို ငိုမိပါပြီ.. ဘူးသီးလောက်ရှိတဲ့ မျက်ရည်လုံးကြီးတွေလည်း “ဝုန်း” ကနဲ.. “ဝုန်း” ကနဲ..။ နှပ်တွေလည်း ထွက်ကုန်ပြီ.. ပုဆိုးလည်း ကျွတ်လုမတတ် အာကာထွန်း အောက်ခံ ဘောင်းဘီတိုတောင် ပေါ်နေပြီ.. ဒင်းမျက်နှာကိုကြည့်တော့ ကျေနပ်ပုံလည်း မပြ.. ဒင်းလည်း တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ ငိုနေတုန်း..
“ကယ် သမီးလည်း ကျေနပ်တော့နော်.. မေမေ ရိုက်ပြီးပြီ နော်..”
မေမေက သူ့ခေါင်းလေးကိုသပ်ရင်း စိတ်ကျေနပ်အောင် ချော့တာပေါ့..
“သမီး မကျေနပ်သေးဘူး မေမေ”
မေမေ နည်းနည်း အံ့သြသွားတယ် ထင်တယ်.. ကျနော်လည်း လန့် သွားတယ်.. မကျေနပ်သေးဘူး ဆိုပါလား..
“ကယ် ပြော.. သမီး ကျေနပ်အောင် မေမေ သူ့ကို ဘာဒဏ်ပေးရမလဲ ပြော.. ဒီည ထမင်း မကျွေးပဲ ထားမယ်လေ နော်.. တိတ် တိတ် သမီး မငိုနဲ့တော့..”
မေမေက သူ့ပုခုံးလေးကို ဖက်ရင်း မျက်ရည်လေးတွေကို သုတ်ပေးရင်း ချော့နေတာပေါ့..
“မရဘူး.. မရဘူး.. အီးးဟီးးးဟီးးဟီးး”
“ကယ်.. ဒါဆို မေမေ သူ့ကို ဘာလုပ်ခိုင်းရမလဲ..”
မျက်ရည်တွေကို လက်ဝါးနဲ့သုတ်.. နှာဖျားက နှပ်တွေကို လက်ညိုးနဲ့ ဖြတ်သုတ်.. မျက်နှာကို ကောက်ချိတ်ပြီး...
“သူ့ကို အဲ့ဒီ ဖုန်မှုန့်တွေ ပြန်စားခိုင်းမယ်..”
မေမေရော ကျနော်ပါ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်..
ကျနော်လည်း ယောင်ယမ်းပြီး ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားလိုက်တယ်..
“သမီးရယ်... အဲ့ဒါတော့.. သမီးလေးရယ်..”
မေမေက ကျနော့်အတွက်နဲ့ သူ့ကို ချော့နေရပြီ..
“ဟေ့ ခင်လေးစုတ် နင် မညစ်ပတ်နဲ့ နင့်ကို ငါကျွေးတာ တတို့ပဲ.. နင့်ဟာနင် ငတ်ကြီးကျပြီး အကုန်ယူစားတာ..”
“ကောင်စုတ် နင် နင်.. အီးးးဟီးးး တွေ့လား မေမေ.. သမီးကို.. အီးးဟီးးး”
“သမီးရယ်.. မငိုနဲ့နော်.. မငိုနဲ့တော့နော်.. .. ဟဲ့.. ရင်နော် နင်လည်း သွားစမ်း ငါ့မျက်စိရှေ့က ထွက်သွား.. သွား ငါ ထပ်ရိုက်မိတော့မယ်.. သွားး.. ရေသွားချိုး..”
မေမေ ထပ်ငေါက် တော့ ကျနော်လည်း ထပ်ရိုက်ခံရမှာ စိုးတာနဲ့ အိမ်ထဲ ပြေးဝင်လိုက်တာပေါ့..။ တကယ်တော့ မေမေက ကျနော့်ကို တပတ်လည့်နဲ့ လစ်ခိုင်းလိုက်တာ သိသားပဲ..။
ဘယ်ရမလဲ ဒင်းကိုတော့ ဘုကြည့် ကြည့်ခဲ့လိုက်သေးတယ်..။
မေမေ ဘယ်လိုချော့ လိုက်တယ်မသိဘူး.. ကျနော် ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ ခြံတံခါးနား ရောက်နေကြပြီ..။
မေမေ့ အတွက်ကတော့ ခင်လေး လာလာတိုင်တာ ရိုးနေပါပြီလေ..
ကျနော့် အတွက်လည်း မေမေရိုက်တာ ရိုးနေပြီပဲ..
ခင်လေးသာ ကျနော် စ တာ မရိုးသေးတာ..
စိတ်ထဲကနေ လက်သီး ထောင်ပြလိုက်တယ်..
တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ခင်လေးငယ် ဆိုတဲ့ သေနာမ ရယ်...။
အချိန် 3:22 PM
တီတီငယ်ကလည်း လက်ဝါးပြန်ထောင်ပြလိုက်တယ်.... နောက်တစ်ခါဆို ဒီလို လာမယ်ဆိုပဲ... ခိခိခိ
ကိုရင်နော် ကတော်၂ဆိုးတာပဲ မခင်လေးရေ မခံနဲ့နော် ပြန်သာလုပ် (ချွန်ခဲ့ပြီ)
အော် အရိုင်းအသံတောင် ပြန်ကြားယောင်တယ်။
ပြီးရင် သူပဲ ခံရဦးမှာ
ဟက်ဟက်ဟက်.. အဆက်ရှိသေးရင်လုပ်ပါဦးဗျို့.. အဟီး.. ရယ်ရတာအရမ်းပဲ.. ရေးတတ်လိုက်တာလည်းပြောမနေနဲ့ဦးနော်တို့များ..
ဒါပေမယ့်စိတ်မကောင်းတာက တီငယ့်အတွက်.. တီနားပါတယ်တားငယ်တီငယ်လေး..း(
(မမကလေးလေးကိုထောက်ခံတယ်.. သင်္ကန်းစည်းရုံမက တောပါအတင်းထွက်ခိုင်းမယ်)
ဦးနော် ညစ်ပတ်ကြီး ဘယ်လောက်စစ ဖုန်မှုန့်တွေကတော့ အဟီးး ဘာတွေပါသွားလဲမသိ ခင်လေးကလည်း အကုန်လုံးကိုတီးပစ်လိုက်တာ ငါ့သယ်ရင်းက ဒီလိုဆိုတော့လည်း ကြင်နာတတ်သားလို့တွေးနေတယ်ဖြစ်မယ်း) ဦးနော်တို့ရဲ့ ရေစက်ကတော်ရုံမှမဟုတ်တာ ထူးခြားမှုတွေနဲ့ တကယ့်ကိုပျော်စရာ သူငယ်ချင်းတွေပဲ ။ နောက်လည်း ဆက်လက်ပျော်နိုင်ပါစေဗျာ ဒီပိူ့စ်လေးဖတ်ရတာ တင်းနေတဲ့ မျက်နှာပေါ်က အကြောတွေပြေသွားတယ် ။ ကျေးဇူးပါ ။
အင်း .. ကိုရင်တစ်ယောက်ကတော့ .... ဟင်းးး (သက်ပြင်းချသည်) (ခေါင်းခါသည်) (ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိမ့်သည်) (လှည့်ပြန်သည်) (တစ်ယောက်တည်းရေ ရွတ်မိသည်) သြော်.... ကိုရင်တွေများ ... အဟေးဟေး :P
အဟား ဦးနော်တို့ ငယ်တုန်းကကိုးး ပျော်စရာကြီး ဦးနော် နော် နောက် တီငယ်ကို ဖုန်လျှက်ဆား ကျွေးနဲ့ တီငယ် ဦးနော်ကို တွယ်လိုက်မယ် နောက်အပိုင်းတွေ စောင့်နေတယ် မြန်မြန်လေး..
ဒီလိုမှန်းသိရင် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဦးနော်ကို ပြန်လက်စားချေဖို့ မယ်မယ့်ကို ဂြိုလ်တု လျပ်စား ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဂလဲ့စားချေတဲ့အနေနဲ့ တစ်ထုတ်လုံး စားဖို့ပေါ့... ဟိဟိ... :P
ဦးနော်မေမေကလည်း တော်တော်ပညာပါတယ်... သားလေး ဖုန်မှုန့်လျပ်ရမှာစိုးလို့ ... ငါ့မျက်စိရှေ့က ထွက်သွား .. ငါ.. ထ ရိုက်မိတော့မယ်.. တဲ့.. ဟတ်ဟတ်.. လူကြီးတွေများ.. ပညာပါတယ်.. :P :P
မယ်မယ်.. ဘာမှမပူနဲ့ .. အဲဒီဒါ ဟိုး.. ကလေးဘ၀တုန်းက မလား.. အခု မယ်မယ်လည်း ပြန်လုပ်လို့ရတယ်.. ဦးနော်သောက်မဲ့ ဘီအီးပုလင်းကို ရေတွေ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်.. ခစ်ခစ်.. (အချွန်နဲ့ မသွားတာ.. ):P :P
ကိုရင်ပေးတဲ့ ရက်စားက ကောင်းလား....
စားလို့ကောင်းရင် ဘလော့လည်လည်လာတဲ့ သူတွေကို မျှလိုက်ဦးနော်..
ဆင်ဆင်ကတော့ ထိပ်ဆုံးက စားမှာ သေချာတယ်း)
ဟားဟား။ ကိုရင်နော်က တကယ့် ဘရုတ်ပဲ။
ဟီး ရီရတယ် တား တီငယ်ယေးတော့ တနားပါတယ်။
ဘာအရသာရှိလဲ တီငယ် ကောင်းလားဟင်း)
သမီး မကျေနပ် သေး ဘူးဆို တာ ကတော့
ဒီပိုစ့်ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ကိုအဖမ်းစားဆုံး
ဖြစ် လိမ့် မယ် ထင် ပါတယ် ၊ ကျနော်ဆို အဲလောက် ရိုက် ပြီးမှတော့ ကျေ နပ်မိမှာ ပါ။
အချွန်နဲ့ မခဲ့ပီ... အဟီး..
ဦးနော်ကတော့ နယ်နယ်ရေးကိုတော်တော်အနိုင်ကျင့်ပါလား ငယ်ငယ်ကကလေးဘ၀ကိုနက်နက်လဲပြန်အမှတ်ရသွားတယ် ဖတ်ရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်သွားပါတယ် လာဖတ်တဲ့သူတိုင်းပြုံးသွားစေတဲ့ဦးနော်ရဲ့ လက်ရာကတော့ပြောင်မြောက်ပါ့
“ ကိုရင် ( ဠူ ဇိုး )”
ခင်လေး က တကယ် ဖြစ်နေလို့ပါ ကိုယ်သာဆို ပေါင်မုန့်ယိုသုပ် ကြားထဲ ဝမ်းနှူတ်ဆေးတွေထည့်ထားပြီး “ခုနှစ်လုံး နဲ့ ပေါင်းပြီး” ဗိုက်နာချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက် မှာ :-)
စကားမစပ် ကိုရင်တို့ သူငယ်ချင်း အဲဒီ ခုနှစ်လုံး (ထက်သူဇာလှဝင့်ရွှေရည်) တစ်ယောက် ဆရာဝန် ဖြစ်သွားရင် ဒုက္ခ.
(လူနာ တွေအစား စိတ်ပူမိလို့ပါ. Serious ဖြစ်နေချိန် နာမည်မဆုံးခင် ဘဝကူး သွားနိုင်လို့) :-)
She believed you what you said. Or
She got seriously pain in stomach.
မခင်လေးရေ ဒီလောက်ဆိုးတဲ့သူနဲ့ မွေးကတည်းက ရေစက်ဆုံရတာ သနားပါတယ်။ ငယ်ငယ်က အစခံရလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေရမှာ မြင်ယောင်နေတယ်။
မမခင်လေးသနားပါတယ်။ ဦးနော်က ငယ်ငယ်တည်းက အနိုင်ကျင့်နေကျကိုးးး.......
ူlittle brook said...
ကျွန်တော် ဖတ်တယ်၊ ပြုံးတယ်၊ ဖတ်နေတဲ့ တလျှောက်လုံး ပြုံးနေစေတယ်။ ဖတ်ပီးတော့ ကြည်နူးတယ်။ မှတ်ချက်ပေးဆိုရင်တော့ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ စာတိုလေးပါ။
ဦးနော်ရယ် အဲလောက်ဆိုးရလား။ မမခင်လေး သနားပါတယ်။ မမခင်လေး ဒီတခါ ဦးနော်ကို လက်ဝါးပြန်ထောင်ပြလိုက်။ တိုင်ပြောလည်း ဦးနော်က ကြောက်မှ မကြောက်တာ ပြန်သာချတော့။ ဟီး ချွန်ခဲ့တယ်။ ပြေးပြီ .......